Kaartaa Itoophiyaa naannoo Oromiyaa fi Amhaaraa agarsiisu
Wixata dabre kana irraa jalqabee, walitti-bu’insa uumameen lubbuun namoota meeqaa akka dhabamee fi namoonni meeqa akka madaa’anii fi hidhaman, akkasumas – qabeenyaan hagam akka barbadaa’e ragaa qulqullaa’aa argachuu akka hin dandeenyetti, haalawwan cufaa itti ta’uu isaanii – Dhaabbatni Tokkummaa Guutummaa Itiyoophiyaa - MIAD beeksisee jira.
Paartiin ka biraan, Arennaa Tigiraay jedhamu gama biraatiin, “Haala uummatni Tigiraay itti jiru hubachuu dhabuu irraa kan ka’e, lammiwwan keenya naannoolee Oromiyaa fi Amaaraa keessatti ajjeesamaa jiraniif deggersa hin agarsiisne” jechuudhaan, dhalattoota Tigiraay irratti dhiibbaa gochuu, qabeenyaa isaanii gubuu fi hari’uun akka naannoo sanatti mul’atee jiru dubbata.
Bulchiinsa naannoo Amaaraa keessaa, namoonni Wegeraa, Matammaa fi Dabaarq keessa jiraatan “wal-muddinsi itti fufee jiraa. Namoota ajjeesuunis itti fufee jira” jedhu.
Aangawaan Bulchiinsa Naannoo Amaaraa garuu, dhimma sana tasgabbeesuuf jecha, uummata waliin ka marii geggeessaa jiru ta’uu dubbata.
Har’a magaalaa Gonder keessatti mariin uummataa fi mootummaa gidduutti geggeessame walii-galtee tokko adda-faca’uu isaa ka dubbatan – maanguddon hoogganaan amantii tokko, “otuu ijoolleen keenya ajjeesamaa jiranii haalli jiru tasgabbaa’ee jira akka jennu barbaadu” jedhuun – mufannaa isaanii, waahila keenya Tsiyoon Girmaatti dubbatan.